I Isaia sy i Hezekia ary i Sankeriba ( Isa 3:1-3)
Vakio ny tantara ao amin'ny Isa. 36:1-3 sy ny Isa. 37:14-38. Tonga hiady amin'ny Joda ny tafika asirianina marobe ao amin'io tantara io nahoana ny fomba namonjen'Andriamanitra ny olony?
Niady tamin'ny firenena Joda i Sankeriba tamin'ny 701 TlK. Hita ao amin'ny Baiboly ny fitantarana izany. Nanoratra mikasika izany ady izany tamin'ny tomba maro mihitsy aza i Sankeriba tao amin'ny diariny. Hita tany Ninive, renivohitry ny tanànany, izany rakitra an-tsoratra izany. Nirehareha toy izao izy tao anatin'ny firaketany: "46 tamin'ireo tanàna mimandany [an'i Hezekia] sy tanàna kely marobe manodidina azy no nataoko fahirano sy nobaboiko". Tao amin'ny lapany tany Ninive no nankalazan'i Sankeriba ny nandreseny ny tanàna jiosy Lakisy. Nasainy nasiana kisarisary naneho ny fandreseny ireo rindrin'ny lapany.
Ny fihadian-tany natao tany Lakisy vao haingana no nahitana ny potipoti-javatra tamin'ny faharavan'ny tanàna taorian'ny nandoroan'i Sankeriba izany. Voaro tamin'ny tomba mahagaga kosa i Jerosalema ka tsy afaka nirehareha ny aruin'ny fandravany azy i Sankeriba. Izao ihany no fideraderana azony natao: an'i Hezekia joda indray, dia nohidiko tao an-tanànany tahaka ny vorona an anatin'ny tranokeliny izy''. Tsy nisy ny filazalazana ny amin'ny nandravana Jerosalema na ny fitantarana ny amin'ny olona babo avy tao an-tanàna nentina ho andevo.
Marina tokoa fa nanao fahirano an'i Jerosalema i Sankeriba, saingy iray andro monja no naharetan'izany. Rehefa izay dia nanafaka an'i Jerosalema ny Anjelin'i Jehôvah, araka izay efa nambaran'i Isaià mialoha: "Koa izao no lazain'i Jehôvah ny amin'ny mpanjakan'i Asyria: Tsy ho tafiditra amin'ity tanàna ity izy, na handefa zana-tsipika ho ato, na hitondra ampinga eo anoloany, na hanandratra tovon-tany hamelezany azy. Ny lalana izay nihaviany ihany no hiverenany, fa tsy ho tafiditra amin'ity tanàna ity izy, hoy Jehôvah. Fa hiaro ity tanàna ity Aho ka hamonjy azy noho ny amin'ny tenako sy Davida mpanompoko" - Isa.. 37:33-35.
Mahaliana tokoa fa ny tanànan'i Lakisy ihany no vita sary ao amin'ny rindrin'ny lapan'i Sankeriba fa tsy hita ao ny sarin'i Jerosalema. Milaza amintsika izany fa tsy nandresy an'i Jerosalema izy, ka ny nandreseny an'i Lakisy ihany no azony nireharehana. Nasehon'ilay Andriamanitry ny lanitra fa mahery noho ny andriamanitry ny Asirianina Izy. Hitantsika izany rehefa namonjy ny olony tanan'ny tafika Asirianina Izy. Hitany ny nifehezan'ny Asirianina an'i Joda, reny ny vavaka nataon'i Hezekia, ary miditra an-tsehatra eo amin'ny tantara Izy mba hamonjena ny olony.